दलितको घरमा रित्तियो भकारी « प्रशासन
प्रकाशित मिति : 12 April, 2020 9:21 am
नेपालीले भने, “कमाइ गर्न भारत गएका छोराबुहारी आउन पाएन्न्, मेरो एकल महिला भत्ताबाट साहुको ऋण तिरेँ । अहिले खानाको जोहो गर्न निकै समस्या छ ।”
शान्तिलाई जस्तै अयर्ना गाउँकी पवित्रा नेपालीको पीडा पनि उस्तै छ । उनले भने, “ऋण काढेर श्रीमान कमाइ गर्न भारत जानुभयो, चैत महिनामा आउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर गाडीको टिकट काटे पनि लकडाउनपछि आउन पाउनु भएन । यहाँ खर्च र खाद्यान्न सकिएको छ ।”
परिवार पाल्ने चिन्तामा परेकी पवित्राले थपिन्, “मकै राखेको भकारी रित्तो भयो, चार छोराछोरीलाई कसरी साँझ बिहान खाना खुवाउनु ? मालिक छिटो कालापारबाट आएको भए केही हुने थियो ।”
अयर्ना गाउँकै तोल्मा नेपालीले लकडाउनअघि गाउँका विकास निर्माणका काम गदैँ ज्यालाबाट आएको कमाइले छोराछोरीलाई खाना दिने काम भएकामा अहिले समस्या भएको गुनासो गरे । उनले भने “कसरी खानाको व्यवस्थाप गर्ने र कमाइ गर्ने ? श्रीमान बितिसक्नुभयो । अहिले घर व्यवहार सबै मेरो जिम्मामा छ ।”
बारेकोट गाउँपालिकाले अझै गरिब परिवारको लागत सङ्कलन गरिसकेको छैन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले झण्डै ४ सय घरधुरी गरिबीको रेखामुनी रहेको र लगक सङ्कलन भइरहेको बताए ।
कुशे गाउँपालिकामा यस्तै समस्या छ । गाउँपालिकाले गरिब घरधुरी छान्दा १७० घर बनाएको थियो, अहिले गाउँपालिकामा १ हजार भन्दा बढी घरधुरीबाट खाद्यान्न मौखिक माग आएको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या परको सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताए ।
भेरी नगरपालिकाले पनि राहत वितरणको काम सुरु गरेको छैन । छेडागाड नगरपालिकामा पनि राहत वितरणमा समस्या परेको छ । सबैलाई दिन बजेट नपुग्ने सो पालिकाका नगरप्रमुख लालबहादुर महतराले बताए ।
नलगाड नगरपालिकाले भने गरिब घरधुरीको पहिचान गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए । सो पालिकाले वडा ७ र ८ बाट राहत वितरण शुरु गरेको थियो ।
यता जुनिचाँदे गाउँपालिकामा राहत वितरणको लागि सदरमुकामस्थित खाद्य संस्थाबाट ५२ क्विन्टल चामल, सोही मात्रमा आयोडिन युन र दाल खरिद भइसकेकोले आजबाट वितरण हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वदल शाहीले जानकारी दिए । शिवालय गाउँपालिकाले १५० जना गरिब परिवार छनोट गरी राहत वितरणको काम सम्पन्न गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार शाहीले जानकारी दिए ।
Tags : दलित